Xiaomi waxay layaabtay taleefan casri ah oo 6,4-inji ah oo "wax walba" shaashad ka yihiin | Wararka IPhone
Xiaomi waxay layaabtay taleefan casri ah oo 6,4 inji ah oo "wax walba" shaashad ku yihiin
Jose Alfocea | | Tartanka
Ka dib markii lagu soo bandhigayay Beijing ee Mi Note 2 cusub iyo qalabkeeda xaqiiqda dhabta ah, ee Mi VR, shirkadda weyn ee Shiinaha ee Xiaomi ayaa haysatay wax ka badan xiisaha ay u leedahay shaashadda ay ugu magac dartay "Mi Mix". Waa taleefan casri ah oo cajiib ah calaamadee dariiqa ay shirkaddani rabto inay ku socoto qaar badani wali waxay ku tilmaamaan "Apple-ka Shiinaha."
Mi Mix-ka ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay casriga casriga ah "Shaashaddii ugu horreysay adduunka ee bilaa bilaa". Naqshadeynta waxaa sameeyay naqshadeeyaha Faransiiska Philippe Starck. Natiijaduna waa terminal leh shaashad 6,4-inji ah, xallinta 2040 x 1080 pixels, iyo saamiga muujinta 17: 9 iyadoon xuduudo lahayn fadhiyaa boqolkiiba 91,3 boqolkiiba Qalabka. Dhaldhalaalka kaliya ee muhiimka ah waa midka shaashadda hoose, laakiin waxaa ka maqan badhanka jirka. dhammaan kontaroolada ayaa lagu dhex daray shaashadda.
1 Xiaomi wuxuu ku beddelayaa taleefan casri ah oo aan lahayn jajab
1.1 Laakiin meeye qaybaha?
1.2 Moodooyinka, qiimaha iyo helitaanka
Xiaomi wuxuu ku beddelayaa taleefan casri ah oo aan lahayn jajab
Xasilloon! Ma aadan sameyn baloog khaldan, tani wali waa iPhone News laakiin sidoo kale tartanka, markii uu u qalmo, wuxuu leeyahay god ku yaal booskeena. Tani waa kiiska layaabka ee ay Xiaomi ku haysay, Mi Mix, oo muuqaalkeedu si qurux badan u qurux badan yahay oo sharaf leh, oo kaliya maahan cabirkiisa.
Xiaomi waxay la midowday naqshadeeyaha caanka ah ee reer France Philippe Starck si loo joojiyo isbarbardhiga Apple, waqtiyada kale, aad ayuu u jeclaa. Sidaa darteed, waxay soo bandhigtay shaashad dhererkeedu dhan yahay 6,4-inch halkaasoo ay u muuqato inaysan jirin guri kale oo aan ahayn shaashad ballaaran tan iyo markii Mi Mika ka maqan yahay dhinac iyo jilaar sare.
Laakiin meeye qaybaha?
Waxa ugu badan ee dareenkeena soo jiita ee ku saabsan Xiaomi Mi Mix ayaa ah, lama huraan, shaashadeeda, laakiin waxay ka dambaysaa iyada oo hal-abuurka runta ah ee terminalkan laga helo maxaa yeelay meeye waxyaabihii aan dhaqan ahaan ku ilaalin jirnay xagga hore ee sawirka taleefanka? Xiaomi waxay heshay xalka si ay u qariso waxaas oo dhan. Tusaale ahaan, dareeraha dhawaanshaha ayaa hadda la shaqeeya ultrasound wuxuuna ku qarsoon yahay shaashada gadaashiisa.
Sidoo kale, kamaradda hore ayaa hadda qaadaneysa kala bar booska marka loo eego module caadi ah oo sidaas ah, hn ayaa awooday inuu ku qariyo gadaashiisa birta kaliya ee taleefanka, xagga hoose. Laakiin ka waran qofka hadlaya? Tani waa tan ugu fiican dhammaan maxaa yeelay sameecadda dhaqameed waxaa lagu beddelay "Cantilever piezoelectric ceramic acoustic technology" oo sida muuqata u shaqeysa iyadoo ku saleysan gariirka muraayadda.
Qaybta buluugga ah ee sawirka ayaa ah "Cantilever piezoelectric ceramic acoustic technology" oo ku saleysan gariirka muraayadda si loogu beddelo sameecadda dhaqameed.
Marka laga hadlayo cabirrada, Isku-dhafka Xiaomi Mi wuxuu bixiyaa a 7,9 mm dhumucdiis iyo a miisaanka 209 garaam taas oo, marka la fiiriyo shaashadeeda weyn, aan haba yaraatee wax xun ahayn.
Moodooyinka, qiimaha iyo helitaanka
Xiaomi Mi Mix cusub ayaa soo baxaya iibka Nofeembar ee soo socota. Waxaa lagu heli doonaa laba nooc, oo labadaba leh processor isku mid ah Snapdragon 821 laakiin waxaa lagu kala duwan yahay RAM iyo awoodda kaydinta gudaha:
Mi Mix oo leh 4GB RAM iyo 128GB kaydinta
Mi Mix 18K oo leh 6GB RAM iyo 256 GB kaydinta, oo leh giraan dahab ah oo kaamerada ku jirta iyo dareeraha faraha.
Labaduba waxay wadaagaan inta ka hartay qeexitaanada farsamo ee waliba aaladaha kale sida 16 megapixel camera-ka dambe iyo 5 megapixel camera hore, 4.400 mAh baytari leh Charge Quick Charge 3.0 nidaamka degdega ah, codka HD, taageerada NFC, iwm.
Hadana haddii aad ka yaaban tahay qiimaheeda, waxaan horeyba u rajeyneynaa in aysan noqon doonin mid raqiis ah sidii caadiga ahayd ee Xiaomi laakiin wali, waa mid cakiran ka dib markaan aragnay wixii aan aragnay: qaabka ku imanaya 4GB / 128GB wuxuu yeelan doonaa qiimaha 3.499 yuan (qiyaastii 500 euro) halka Mi Mix 18K oo leh 6GB / 256GB uu ku kici doono 3.999 yuan (qiyaastii 550 euro)
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Xiaomi waxay layaabtay taleefan casri ah oo 6,4 inji ah oo "wax walba" shaashad ku yihiin
Raadi ama ku iibso gaarigaaga barnaamijka Autos.net